Xildhibaan Mahad Salaad:“ Guddoonka Baarlamaanka waxa uu is-hortaageen ku sameeyay 3 Mooshin oo Xukuumadda lagula xisaabtamilahaa” – Radio Daljir
Xildhibaan Mahad Salaad:“ Guddoonka Baarlamaanka waxa uu is-hortaageen ku sameeyay 3 Mooshin oo Xukuumadda lagula xisaabtamilahaa”
Oktoobar 31, 2019 10:57 b 0
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa dhaliilay sida ay ku socoto shaqada loo igmaday Baarlamaanka Soomaaliya, isagoo is weydiiyay waxa ay tahay shaqada saxda ah ee laga rabo Guddoonka iyo Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Hadal uu ka jeediyay fahdigii Xildhibanaada ee Arbacadii, ayuu sheegay in shaqada saxda ah ee Baarlamaanka ay tahay Sharci dajin, Isla Xisaabtan, Korjoogten iyo Matalaad, wuxuuse tilmaamay in aysan jirin Xildhibaano sidaas u og shaqadooda amaba u fushada.
Waxaa uu soo hadal qaaday saddex mooshin oo uu sheegay in laga keenay Xukuumada Ra’iisul Wasaare Kheyre, si loola xisaabtamo, kuwaasoo dhamaantood ay meel isaga tuureen Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay ineysan garaneynin sababta loola Xisaabtami la’yahay Wasiirada RW Khayre.
“Gudoomiyayaaloow idinka ruuxiina xantiina ayaantaan wey badan tahay, hadii la yiraahdo Wasiir Hebel haloo yeero, hadii la yiraahdo Ra’iisul Wasaaraha Su’aalo halaga keeno, hadii la yiraahdo madaxweynaha halala Xisabatamo inaa horta idinka marka hore soo boodiin oo Maxaa loogu yeeraa aad dhahdiin ayaa halkan idiin taala” ayuu yiri Xidlhibaan Mahad Salaad.
Barnaamijka Muuqaalka Bulshada, Sharci matahay xasaanad ka qaadista xildhibaan Cawil Daad? Maxaase laga filikaraa baarlaanka Puntland?(dhegayso)